ပုစွန်ကျားအစပ်ကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ွှTiger Prawn လို.ခေါ်တဲ့ပုစွန်ကျားရဲ.အသားကအရမ်းကျစ်လစ်ပါတယ်..။
ခေါင်းချိုးပုစွန်ကျား..........၂၀ ကျပ်သားခန်.
ငရုတ်ကြမ်းမှုန်. ...............၂ ဇွန်း(ထမင်းစားဇွန်း)
ကြက်သွန်ဖြူ ...................၆- ၇ တက်ခန်.
ခေါင်းချိုးပုစွန်ကျားတွေကိုအခွံခွာပြီး.ပုစွန်ငံပြာရည် ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို.နဲ့
ဆီအနည်းငယ်ကိုအပူပေးပြီးကြက်သွန်ဖြူ ၂ တက်လောက်ကိုနုပ်နုပ်စဉ်းထည့်
ဆီသတ်ပါ ။ ပုစွန်က စစ်ထွက်လာတဲ့အရည်ကုန်ခမ်းသည်အထိ အိုးကင်းတိုက်ပုံစံလေးပြုလုပ်ပြီး..အအေးခံထားပါ။
လက်ကျန်ကြက်သွန်ဖြူ ကိုနုပ်နုပ်စဉ်း (သို.) ညှက်အောင်ထောင်းပြီးဆီသတ်
ပါ။ အနည်းငယ်မွှေးလာလျှင် ငရုတ်ကြမ်းဖတ်တွေထည့်မွှေပေးပါ။
ပုစွန်ငံပြာရည်ကို ဖြန်းထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပြီး..ခမ်းအောင်ကြော်ပါ။ ဟင်းခတ်မှုန်.နဲ.အရသာသွင်းပါ။
ပထမတင်ပေးထားတဲ့သရက်သီးသုပ် ၊ ပဲဟင်းရည်လေးနဲ.တွဲဖက်..ကောင်းမှ